HGH मलेशिया | कुआलालम्पुरमा मलेशियामा विकास हार्मोन कहाँ खरीद गर्न
HGH मलेशिया | कुआलालम्पुरमा मलेशियामा विकास हार्मोन किन खरीद गर्नुहुन्छ?
मलेशियामा 100% उत्पादन गुण वृद्धि हार्मोन (एचएचजी सोमोटोट्रोप)
हामी मलेसियामा विकास हार्मोन उत्पादनको आधिकारिक वितरक हौं।
यो वृद्धि हार्मोन के हो?
वृद्धि हार्मोन (वृद्धि हार्मोन, एसटीएच, एचएचजी, सोटोट्रोपिन) -
पिट्यूटरी ग्रंथिको पूर्वमा लोबको पेप्टाइड हार्मोन, खेलमा प्रयोग गरिन्छ पेशी राहत बनाउन।
शरीरको उचाई सीधा विकास हार्मोन रिलीजको स्तरसँग सम्बन्धित छ।
औसतमा, 20 वर्ष हरेक 10 वर्ष पछि यसको उत्पादनको स्तर 15% द्वारा घट्यो।
विकास हार्मोनसँग यौन मतभेद छैन। त्यो हो, यसको स्तर पुरुष र महिलाको लागि हो।
यस तथ्यको बावजूद कि ड्रग्स को प्रयोग मा वृद्धि हार्मोन,
WADO (विश्व एंटी-डोपिंग संगठन) द्वारा रोकिएको छ,
मलेशियामा यी उत्पादनहरू बिक्रीमा छन्। प्रयोगका लागि संकेतहरू:
- एंटी एजिंग कार्यक्रम
विरोधी उमेर कार्यक्रम
हार्मोनहरू प्राकृतिक पदार्थ हुन् जुन तपाईंको स्वास्थ्यको लागि अत्यावश्यक छ। उमेर संग, हार्मोन को सामाग्री
धीरे - धीरे घट्छ, जो को त्वरण को लागी जान्छ
उमेर बढ्ने प्रक्रिया र सम्बद्ध उभार
रोगहरु संग उमेर। प्राकृतिक हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी तपाईंको शरीरलाई दूध हार्मोनको स्तरमा पुनर्स्थापित गर्दछ, तिनीहरूलाई स्तरमा फर्काउँछ जुन तपाईंको शरीर जवान वर्षमा आदी भएको छ।
शुरुवातका लागि सिफारिसहरू:
- बिस्तरमा जाने अघि दैनिक 2IU सँग सुरु गर्नुहोस् (खाली पेट)।
-5दिन र2दिन बन्द।
- हामी बिहान / शाम (हरेक दुई महिना) को समय परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गर्दछौं।